Nilaza i Kuo fa ny baikon'ny iPhone 13 dia lehibe kokoa noho ny 12, ankoatra izay dia hanohy hanana tahiry kely | Vaovao IPhone
Ny iray amin'ireo olana sedrain'ny orinasa ankehitriny dia ny tsy manana tahiry vokatra hamidy bebe kokoa. Amin'izao fotoana izao ny tsy fahampian'ny processeur, ny plastika, ny hazo ary ny akora amin'ny ankapobeny no filaminan'ny andro ary hitantsika izany amin'ny orinasa mpamokatra fiara, indostria amin'ny ankapobeny ary mazava ho azy, amin'ny orinasa teknolojia ihany koa.
Amin'ity tranga ity, ilay mpandalina fanta-daza Ming-Chi Kuo, dia nilaza tamin'ny tatitra farany nataony fa hijaly ny orinasa Cupertino tsy fahampian'ny tahiry ao amin'ny iPhone 13 Pro hatramin'ny Novambra farafaharatsiny. Ho fanampin'izay, voalaza ihany koa fa ny fangatahana modely iPhone 13 vaovao dia nihoatra ny vidin'ireo maodely teo aloha, ny iPhone 12.
Telo andro taorian'ny nanombohan'ny famandrihan-toerana ho an'ireo mpampiasa liana amin'ny fividianana ny iPhone 13, ilay Kuo tsara dia nanambara tamin'ny famoahana nataony ho an'ny mpampiasa vola izany avo kokoa ny fangatahana tamin'ny voalohany y izay mitohy amin'ny fanantenana an-tsena napetraka alohan'ny fanombohan'ny varotra na ny famandrihana.
Nanazava i Kuo fa ny fangatahana mialoha ny baiko ho an'ny iPhone 13 Pro sy ny iPhone 13 Pro Max dia avo kokoa noho ny an'ny iPhone 13 mini sy ny iPhone 13. Etsy andaniny, ary miaraka amin'ny olana eo amin'ny famatsiana manerantany, dia nilaza izy fa ity mpandalina ity dia hijaly ny mafy orina ny fahatarana amin'ny fandefasana mandra-pahatongan'ny Novambra amin'ny maodely iPhone 13 Pro sy Pro Max.
Ity dia zavatra efa nitranga tamin'ny herintaona ary mety hitranga ihany koa amin'ity taona ity, satria izy no iPhone be mpitady indrindra amin'ny voalohany. Ny mazava dia ny vinavinan'i Kuo dia manodidina ny fandefasana iPhone ary amin'io lafiny io andrasana hitombo 16% isan-taona amin'ny taona 2021 misaotra amin'ny ampahany amin'ny tsena amerikana avaratra sy ny veto an'ny orinasa toa Huawei.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 13 » Nilaza i Kuo fa ny baikon'ny iPhone 13 dia lehibe kokoa noho ny 12, ankoatra izay dia hanohy hanana tahiry kely izahay